2018-11-02 | Job Vacancy in Myanmar
2018-11-02 22:32:33 , အလုပ်အရမ်းများလို့ အင်္ဂလိပ်စာလေ…
👉အလုပ်အရမ်းများလို့ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့အချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေ👉Interview ဖြေချင်တဲ့သူတွေ👉ဘယ်ကစလေ့လာရမလဲမသိတဲ့သူတွေ👉အခုမှ အခြေခံကစလေ့လာချင်တဲ့သူတွေ👉Grammar သီးသန့်သင်ချင်တဲ့သူတွေ👉အချိန်မရတော့လို့ ရက်တိုသင်တန်းတက်ချင်တဲ့သူတွေ👉အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဝေးနေတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်❤️English စာ သင်ချင်ရင် စုံစမ်းလို့ရပါပြီနော် ❤️သင်တန်းလာတတ်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေအတွက် Online Class လေးရှိပါတယ်နော်
👉အချိန်ကတော့ ရုံးချိန်လွတ်ည ၉-၁၁ပါနော် 👉တပတ်ကို၂ရက်အတန်းဖြစ်ပါတယ်
This entry was posted in Job Vacancy on 2018-11-02 by admin.
2018-11-02 19:00:07 , Plz Admin English4skillလိုက…
English4skillလိုက်သင်ပေးသည်
New Headway booksဖြင့်
Basicမှ Intermediate levelထိသင်ပေးသည်
# only contact with ph
2018-11-02 18:03:28 , Personal Assistant ရာထူးဖြင့် …
Personal Assistant ရာထူးဖြင့် အလုပ်ခန့်အပ်ရန်အတွက် အမျိုးသမီး ၀န်ထမ်းအလိုရှိသည် ..👩 အသက်၁၈နှစ်မှ၂၅နှစ်အတွင်းဖြစ်ရပါမယ်နော် …. Fresh Graduate 🎓 ညီမလေးတွေလည်း လျှောက်လို့ရနေတယ်နော်…. လစာကတော့ (၁၀၀၀၀၀) ကနေ (၁၅၀၀၀၀) ပါနော် အလုပ်အတွက် လိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းလေးတွေကတော့ 👇👇🌟 ဘွဲ့ရ ဖြစ်ရပါမယ်နော် 🌟 Computer သုံးတတ်ရပါမယ်နော် 🌟 Customer နဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရမှာဖြစ်လို့ စကား ပြောချိုသာပြီး တိကျပြတ်သားရပါမယ်နော် 😊🌟 စာရင်းပိုင်းနဲ့ငွေကိုင်ရမှာလေး ရှိနေလို့ ရိုးသားဖို့ တော့ လိုပါမယ်နော် 😊🌟…
2018-11-02 17:27:52 , (notitle)
2018-11-02 17:27:18 , (notitle)
2018-11-02 17:26:00 , သင့်အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလ…
👉သင့်အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း Code – AST1091✅Position – Computer Operator (Male – 1 post) Work Time – 9:00 to 5:30 Location – ​Ahlone Township Day Off – Sunday & Gazzated Day Salary – Negotiate Requirements
2018-11-02 17:25:27 , Position: Sales Executive x2…
Position: Sales Executive x 2
Application Closed Date: 16 Nov 2018 (Friday)
– Sales နင့် Marketing အလုပ်ကို အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားသူ ဖြစ်ရမည်။
– Microsoft Word, Excel, Powerpoint များနှင့် အကျွမ်းတဝင် ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
– Sales presentation ကောင်းကောင်းလုပ…
2018-12-30 19:46:11 , Piano အိမ်လိုက်သင်ပေးသည် Inte…
2018-11-28 12:23:05 , WWR JOB Center မှတစ်ဆင့်လျှောက…
2018-11-28 10:28:10 , WWR JOB Center မှတစ်ဆင့်လျှောက…
2018-11-28 10:24:53 , WWR JOB Center မှတစ်ဆင့်လျှောက…
2018-11-28 09:43:34 , Tecno Smartphone သည် Internati…